Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Nchebe Onwe -> Mgbakwunye
Mgbakwunye: [Nchebe Onwe]
Mgbe ahụ Jisọs tụgharịrị gwa ndị isi nchụaja ahụ, na ndị isi agha ahụ na-eche ụlọ nsọ ukwu ahụ, na ndị okenye ahụ bịara ijide ya okwu sị, “Ùnu chịịrị mma agha na osisi bịa ijide m dị ka a ga-asị na m bụ onye na-apụnarị mmadụ ihe nꞌike?
 Ma ebe nwoke ahụ na-ezi iwu chọrọ igosi na ya bụ onye na-eme ihe ziri ezi, ọ jụrụ Jisọs ajụjụ sị ya, “Onye kwanụ bụ onye agbata obi m?” Jisọs zara sị, “Ọ dị otu nwoke sitere nꞌobodo Jerusalem na-aga nꞌobodo Jeriko. Mgbe ọ na-aga nꞌụzọ, o zutere ndị ohi na-apụnarị mmadụ ihe nꞌike, ndị napụrụ ya ihe nile o nwere, tie ya ihe, hapụ ya nꞌọnọdụ ọdịndụ ọnwụkamma laa. “Ma dị ka ihe si eme, otu onye nchụaja nke ụlọ nsọ ukwu Chineke dị na Jerusalem sitere ụzọ ahụ na-aga njem ya. Mgbe ọ hụrụ nwoke a, o sitere nꞌakụkụ ụzọ ahụ gafee. Otu a kwa, otu onye Livayị na-enyere ndị nchụaja aka nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke bịarutekwara nꞌebe nwoke ahụ tọgbọ nꞌala hụ ya. Ma o sitere nꞌakụkụ ụzọ ahụ gafeekwa. “Ma otu onye Sameria, onye mba ọzọ, onye ndị Juu kpọrọ asị, sitere nꞌụzọ ahụ na-agakwa njem ya. Mgbe ọ bịarutere hụ ebe nwoke a tọgbọ nꞌala, o nwere ọmiko nꞌahụ ya. O sitere nꞌelu inyinya ibu ya rịdata, gaa nso nꞌebe nwoke ahụ dina. O ji mmanya saa ọnya ya, tee ya mmanụ, were akwa kechie ya. Mgbe o mesịrị ihe ndị a, o buliri nwoke ahụ elu, tụkwasị ya nꞌelu inyinya ibu ya, buru ya gaa nꞌụlọ ndị ije, ebe ọ nọ lekọtazie ya anya nke ọma. Nꞌechi ya, mgbe ọ na-akwado ịpụ, o wepụtara naịra abụọ nye onye na-elekọta ụlọ ndị ije ahụ sị ya, ‘Lezie nwoke a anya nke ọma. Ọ bụrụ na i mefuo ego ọzọ karịrị ego a m nyere gị, mgbe m lọghachiri, aga m akwụ gị ya.’ ” Mgbe ahụ Jisọs jụrụ onye ozizi iwu ahụ sị, “Ònye nꞌime mmadụ atọ ndị a ka i chere bụ onye gosiri onwe ya dị ka onye agbata obi nwoke ahụ ndị na-apụnarị mmadụ ihe nꞌike merụrụ ahụ?” Onye ozizi iwu ahụ zara sị ya, “Ọ bụ onye ahụ lekọtaziri ya anya nke ọma.” Mgbe ahụ Jisọs zara ya sị, “Ugbu a laa, gaa mee dị ka nwoke ahụ siri mee.”
Mgbe ahụ Jisọs gwara ha okwu sị, “Ugbu a, ka onye ọ bụla nwere ego were ya, ka onye nwere akpa sere ya. Ọ bụrụkwa na ọ dị onye na-enweghị mma agha, ya ree uwe ya, nweta ego zụrụ otu.
Ma ana m asị unu alụsịla onye na-achọ imeru unu ahụ ọgụ. Kama ọ bụrụ na mmadụ akụọ gị aka nꞌotu nti, tụgharịara ya nti nke ọzọ.
Ụmụnna m, unu abọla ọbọ. Hapụrụnụ Chineke ọrụ ịbọrọ unu ọbọ. Nꞌihi na Chineke kwuru sị, “Ịbọ ọbọ bụ ọrụ m, aga m akwụghachi ha.”
 “Iwu Mosisi nyere kwuru sị, ‘Ọ bụrụ na mmadụ aghụpụ anya gị, ghụpụkwara anya nke ya. Kụpụkwa eze onye kụpụrụ eze gị.’ Ma ana m asị unu alụsịla onye na-achọ imeru unu ahụ ọgụ. Kama ọ bụrụ na mmadụ akụọ gị aka nꞌotu nti, tụgharịara ya nti nke ọzọ.
 Mgbe ahụ Jisọs gwara ha okwu sị, “Ugbu a, ka onye ọ bụla nwere ego were ya, ka onye nwere akpa sere ya. Ọ bụrụkwa na ọ dị onye na-enweghị mma agha, ya ree uwe ya, nweta ego zụrụ otu. Nꞌihi na ọ bụ eziokwu ka m na-ekwu mgbe m na-asị na ihe ahụ akwụkwọ nsọ kwuru banyere m sị, ‘A gụkọrọ ya na ndị mmehie’, ga-emezu.” Mgbe ahụ ha gwara ya sị, “Onyenwe anyị, lee, anyị nwere mma agha abụọ.” Jisọs zara ha sị, “Nke ahụ ezuole.”
Ọ bụrụ na onye ọ bụla ajụ inyere ikwu na ibe ya ka, nke ka nke, onye ọ bụla jụrụ inyere ndị ezinụlọ nke aka ya aka, ekwesịghị ịkpọ onwe ya onye nke Kraịst. Nꞌihi na onye dị otu a dị njọ karịa onye na-ekpere arụsị.
Gị na onye ọ bụla esela okwu. Dị ka ike gị nile ha, mee ka gị na onye ọ bụla biri nꞌudo.
Otu onye nꞌime ndị ha na Jisọs nọ mịpụtara mma agha ya jiri ya bipụ ntị ohu onyeisi nchụaja.
Mgbe ahụ, Saimọn Pita mịpụtara mma ya were ya gbupụ ntị aka nri onye a na-akpọ Malkus. Malkus a bụ ohu onyeisi nchụaja.
 Ma Jisọs sịrị ya, “Mịghachi mma agha gị nꞌọbọ ya, nꞌihi na mmadụ ọ bụla na-eji mma egbu mmadụ ibe ya, ga-anwụ site na mma. I cheghị na m pụrụ ịkpọ Nna m oku ka o zitere m igwe ndị mmụọ ozi, ka ha bịa napụta m? Ọ bụrụkwanụ na m emee otu a, a ga-esi aṅaa mee ka ihe akwụkwọ nsọ kwuru mezuo? Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru na ihe ndị a na-eme ugbu a aghaghị imezu otu a.”
“Dị ka nna nwe ụlọ pụrụ isi gbochie ndị ohi ka ha ghara igbuka ụlọ ya site nꞌịnọ na nche abalị nile,
 Mgbe ahụ, Saimọn Pita mịpụtara mma ya were ya gbupụ ntị aka nri onye a na-akpọ Malkus. Malkus a bụ ohu onyeisi nchụaja. Ma Jisọs gwara Pita sị, “Mịghachi mma gị nꞌọbọ ya! Ị̀ na-eche na m agaghị aṅụ site nꞌiko ahụhụ ahụ Nna m nyere m ka m ṅụọ?”
Bie ndụ ga-egosi ndị mmadụ na ị bụ onye Kraịst. Ejikwala ihe ọjọọ akwụghachi ihe ọjọọ e mere gị.
 Otu onye nꞌime ndị ha na Jisọs nọ mịpụtara mma agha ya jiri ya bipụ ntị ohu onyeisi nchụaja. Ma Jisọs sịrị ya, “Mịghachi mma agha gị nꞌọbọ ya, nꞌihi na mmadụ ọ bụla na-eji mma egbu mmadụ ibe ya, ga-anwụ site na mma. I cheghị na m pụrụ ịkpọ Nna m oku ka o zitere m igwe ndị mmụọ ozi, ka ha bịa napụta m? Ọ bụrụkwanụ na m emee otu a, a ga-esi aṅaa mee ka ihe akwụkwọ nsọ kwuru mezuo? Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru na ihe ndị a na-eme ugbu a aghaghị imezu otu a.”
 “Iwu Mosisi nyere kwuru sị, ‘Ọ bụrụ na mmadụ aghụpụ anya gị, ghụpụkwara anya nke ya. Kụpụkwa eze onye kụpụrụ eze gị.’ Ma ana m asị unu alụsịla onye na-achọ imeru unu ahụ ọgụ. Kama ọ bụrụ na mmadụ akụọ gị aka nꞌotu nti, tụgharịara ya nti nke ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ agbaara gị akwụkwọ nꞌụlọ ikpe ka ọ nara gị uwe ime ahụ gị, nyekwa ya uwe elu ahụ gị. Ọ bụrụ na mmadụ esite nꞌike chọọ ka i soro ya gaa puku nzọ ụkwụ atọ, soro ya gaa puku nzọ ụkwụ isii, ma ọ bụrụ na nke a ga-eme ka udo dịrị. Nye onye ọ bụla rịọrọ gị ihe. Achụghachikwala ndị na-abịa ka ị binye ha ego. “A gwara unu sị, ‘Hụnụ ndị enyi unu nꞌanya, ma kpọọkwanụ ndị iro unu asị.’ Ma asị m unu, hụnụ ndị iro unu nꞌanya, kpeekwaranụ ndị na-esogbu unu ekpere.
 Gị na onye ọ bụla esela okwu. Dị ka ike gị nile ha, mee ka gị na onye ọ bụla biri nꞌudo. Ụmụnna m, unu abọla ọbọ. Hapụrụnụ Chineke ọrụ ịbọrọ unu ọbọ. Nꞌihi na Chineke kwuru sị, “Ịbọ ọbọ bụ ọrụ m, aga m akwụghachi ha.” Kama, ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri ka o rie. Nye ya mmiri, ma ọ bụrụ na ọ chọọ ịṅụ mmiri. Nꞌịhi na ọ bụrụ na ị na-eme otu a, ọrụ ọma gị ga-eme ka ihere mee ya mgbe o chetara ihe ọjọọ o mere gị. Ekwela ka ihe ọjọọ na-achị gị, kama site nꞌezi ọrụ ị na-arụ merie ihe ọjọọ nile.
Otu nꞌime ndị na-eso ụzọ ya jiri mma agha gbupụ ntị otu onye na-ejere onyeisi nchụaja ozi.